မြန်မာ့လက်ရွေးစင်တိုက်စစ်မှူး အောင်သူရဲ့ ၂၀၁၈ အလားအလာ - FOX Sports Myanmar
မြန်မာ့လက်ရွေးစင်တိုက်စစ်မှူး အောင်သူရဲ့ ၂၀၁၈ အလားအလာ
မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ကစားသမား အောင်သူဟာ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှာ ရှိတဲ့ ကလပ်အသင်းများကို သွားရောက်ကစားဖို့အတွက် အသင့်တော်ဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့အတူ ခြေစွမ်းတွေ ပြနေသလို ပြီးခဲ့တဲ့ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာလည်း အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ ကလပ်အသင်းတွေရဲ့ မျက်စိကျခြင်းကို ခံနေရတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Football | Men’s Team Group A: #BRU?? 0-6 #MYA??#KL2017 #RisingTogether pic.twitter.com/j45zZcEdw8
— Kuala Lumpur 2017 (@KL2017) August 18, 2017
အောင်သူရဲ့ လက်ရှိခြေစွမ်းဟာ အကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာ ရှိနေပြီး နောက်ထပ်နှစ်များစွာအထိ အာဆီယံမှာ ထွန်းတောက်မယ့်လူငယ်တစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်တဲ့ ခြေစွမ်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
ဆီးဂိမ်းမှာ ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ အောင်သူ့ကို တော့ စင်ကာပူ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်း၊ မလေးရှားစတဲ့ နိုင်ငံများမှာ ရှိတဲ့ ကလပ်အသင်းများအနေနဲ့ ခေါ်ယူဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
အောင်သူ့အနေနဲ့ကတော့ အဲဒီနိုင်ငံများမှာ သွားရောက်ကစားမယ်ဆိုရင်တော့ ယခုထက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကို ပိုမိုပိုင်ဆိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ် ဂျပန် (သို့) တောင်ကိုးရီးယား စတဲ့ အာရှနိုင်ငံကြီးတွေကို သွားရောက်ကစားမယ်ဆိုရင်လည်း ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနိုင်ငံတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အနည်းငယ်ဝေးကွာနေတဲ့အတွက် အာဆီယံဒေသတွင်းက တစ်သင်းသင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပါပဲ။
အောင်သူဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် FIFA U20 World Cup ပြိုင်ပွဲမှာ ခြေစွမ်းပြလာတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာ့အဆင့်ပြိုင်ပွဲမှာ လှပတဲ့ သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့အတူ ဆက်တိုက်ခြေစွမ်းပြလာတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Aung Thu in action in New Zealand.
အောင်သူဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်မှာ သွင်းဂိုး (၈) ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာတော့ သွင်းဂိုး (၄) အထိ သွင်းယူခဲ့ပြီးတော့ အာဆီယံကလပ်အသင်းတွေရဲ့ မျက်စိကျခြင်းကို ခံရတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူကလပ်ဘလက်စတီးယားအသင်းအနေနဲ့ ကတော့ မြန်မာကစားသမား (၃) ဦးကို ခေါ်ယူထားဖူးတဲ့ သက်သေသာဓကတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ အောင်သူကို ရဖို့အတွက် အာဆီယံဒေသတွင်းမှာ ရှိတဲ့ကလပ်အသင်းတွေက ကြိုးစားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အောင်သူ့အနေနဲ့ကတော့ အာဆီယံဒေသတွင်းက ကလပ်တစ်သင်းသင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ဒါဟာ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပါပဲ။
Hebei China Fortune...
Home Football Myanmar Football မြန်မာ့လက်ရွေးစင်တိုက်စစ်မှူး အောင်သူရဲ့ ၂၀၁၈ အလားအလာ